Okungalindeleka esigabeni 4 se-lockdown - Ilanga News
Home Izindaba Okungalindeleka esigabeni 4 se-lockdown
Okungalindeleka esigabeni 4 se-lockdown
AKUBA ngeSonto esiphuma kulona, ILANGA LangeSonto eliwuzakwabo weLANGA liyithintile indaba yokwehliselwa esigabeni 4 sokuvalwa kwezwe (lockdown) ngenxa yokusabalala kwe-coronavirus edala iCovid-19, nokho sikucacisile ukuthi izobuye yethulwe imininingwane ngezinto esesizokwazi ukuzenza nalezo esisazozibukela kude kulesi sigaba.
Elanamuhla liqukethe uhlu lwalezo zimpahla nemisebenzi umphakathi osungasizakala ngazo kuleli zinga lokuxegiswa kokuvalwa kwezwe okuzoqala kusukela ngenyanga ezayo (1 May 2020).
Kule mizamo kahulumeni yokulwa nokubhebhetheka kwe-coronavirus, kuyaqhubeka ukuvalwa kotshwala nemibuthano yomphakathi kanti ukufaka izimfonyo ezindaweni zomphakathi kusazoqhubeka.
Kulesi sigaba kulindeleke ukuba abantu baqhubeke nokuhlala emakhaya, bangazihambeli izihlobo nabangani – baphume kuphela nxa beyothenga ukudla nokuyothola usizo lokwelashwa nabenza izinhlobo zemisebenzi echazwa njengemqoka.
Izindawo zokucwala izinwele nezinzipho zizoqhubeka nokuvalwa. Umthetho wewashi osebenza phakathi kuka-20h00 no-05h00 usazoqhubeka. Abantu abaneminyaka eyevile kwewu-60 kabakhuthazwa ukuphumela ngaphandle kwamakhaya abo.
Kulesi sigaba sokuvalwa kwezwe yilokhu okulandelayo okulindelekile, imininingwa-ne yakhona esazome-nyezelwa ngongqo-ngqoshe be-minyango eqondene:
∗ Izindawo zokudla okuphekiwe (restaurants)okuthunyelwa emakhaya sezizovulwa phakathi kuka-09h00 20h00;
∗ Abantu sebengawuthenga ugwayi;
∗ Impahla yasebusika yokwembatha neyokulala, izingubo zabantwana nama-heater abantu sebengakwazi ukukuthenga;
∗ Izinto zokubhala nezincwadi zokufunda, ama-computer, omakhalekhukhwini nempahla yokusebenza ehhovisi;
∗ Sekuvumelekile futhi ukuthenga indwangu yokuthunga izimfonyo nokokuzivikela kwi-coronavirus;
∗ Umuntu ngayedwa usengaphumela ngaphandle ema efuna ukuzivocavoca, ukuhamba nokugibela ibhayisikili.
Ukulungisa izinto ezephukile zawo wonke umphakathi sekuvunyelwe.
Abantu ababalelwa ku-1,5 milli-on sebezokwazi ukubuyela emsebenzini njengoba sekuzovulwa imikhakha ethile yemisebenzi nakuba kuzovunyelwa isibalo esithile sezisebenzi kuleyo naleyo nkampani.
Iningi lemisebenzi yengqalasizinda njengemigwaqo, amabhuloho nokulungisa nokukha-nda sekuzovunyelwa.
Ukuhambela kwezinye izifundazwe
Manje abantu sebangaya kwezinye izifundazwe ukuyongena emsebenzini nxa benezincwadi eziwubufakazi balokho.
Sebengaya futhi kwezinye izifundazwe nxa kunomngcwabo noma kunesimo esiphuthumayo esidinga usizo lwezokwelashwa.
Okokuthutha umphakathi njengezitimela, amabhasi namatekisi kuzokwandiswa ukuhlinzekela izisebenzi.
Izimoto eziqashwayo njenge-Uber neBolt zizosebenza phansi kwemibandela ethile.
Abasebenza ezindlini sebengabuyela emsebenzini nxa besebenzela umuntu osebenza emkhakheni ovuliwe esigabeni 4 sokuvalwa kwezwe, kanti bonke abasebenza behlala emizini abasebenza kuyona, sebengabuyela.
Amahhovisi amalayinsense, yizimvume namatayitela asezovulwa, futhi usungaya ukuyolungisa umazisi nokuthola isitifiketi sokuzalwa nesokushona.
Nakuba lungacaci kahle olwezikole, kodwa okusele nokukhombisa isimo esisha esizophila phansi kwaso ngisho sezihoxiswe zonke izigaba zokugonqa – wukuthi njengoba
kungaziwa ukuthi leli gciwane liyoke liphele noma qha, imithetho eyizaba zokuziphephisa njengokufaka izifonyo nokugcina ibanga lokuqhelelana, wukugeza izandla njalo nokusebenzisa izibulalimagciwane izoqhubeka isikhathi eside esizayo.
Previous articleUPule usanethemba lokuyodlala e-Europe
Next articleuSomnandi unikele ngokudla